Zimbabwe Yosangana neZambia muCosafa Fainari
Chikwata chemaWarriors chatarisana nekunyora gwaro idzva mubhuku renhoroondo yemakundano eCosafa Castle Cup mushure mekupinda mufainari yemakundano ezvikwata gumi nezvina aya nezuro manheru.
Chikwata chemaWarriors chatarisana nekuve chikwata chekutanga kutora mukombe weCosafa Castle Cup kashanu mushure mekupinda mufainari neChitatu manheru vadambura Lesotho 4-3 nezvibodzwa zvitatu zvakakandwa naKnox Mtizwa pamwe nechimwe chete kubva kuna Talent Chawapihwa.
Pari zvino, maWarriors akaenzana mukutora mukombe uyu kana neAngola, South Africa pamwe neZambia asi kurova kwavo Chipolopolo neSvondo kunovapa mikombe mishanu vachibva vapinda mumabhuku emakundano aya sevekutanga kuita izvi.
Vanotevera chikwata ichi havasi kuona izvi zvakaoma mushure mekunge maWarriors atamba mitambo mishanu nekukunda mumitambo mina nekuita mangange mumumwe chete izvo zviri kunzi nemuongorori wemutambo wenhabvu, VaFarai Kambamura, zvinoda kupedziswa nemukombe.
MaWarriors ndiwo zvekare akanda zvibodzwa zvakawandisisa mumakundano egore rino mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvitanhatu mumitambo yavatamba kusanganisira zvibodzwa zvitanhatu zvisina kudzorerwa apo vakarova Seychelles 6-0.
Pamusoro pezvo murairidzi wechikwat ichi, Sunday Chidzambwa, ari kutarisirawo zvekare kuve murairidzi wekutanga mumakwikwi aya kutora mukombe uyu katatu mushure mekubudirira muna 2003, na 2009.
Chiri kunakidza ndechekuti pakapedzisira Chidzambwa kutora mukombe uyu muma 2009 muRufaro Stadium chikwata chake chakarova Zambia 3-1 iyo ari kusangana nayo zvekare mufainari yemakundano egore rino.
Asi vanoziva Chidzambwa, uyo akaendesa maWarriors kumaAfrica Cup of Nations avo ekutanga muna 2004, pamwe nekusvitsa Dynamos mufainari yeCaf Champions League muna 1998, vanoti Chidzambwa haatadze kubudirira mune zvaanenge atanga.
Mumwe wacho ndaVa Titus Goya avo vanotevera chikwata chakambotambirwa naChidzambwa cheDynamos.
Veruzhinji zvekare vari kutarisira kuti maWarriors achadzoka kumba nemukombe uyu mushure mekushanda zvakasimba munzira yekusvika mufainari varova Mozambique 4-0, Seyschelles 6-0, Swaziland 2-1, neLesotho 4-3.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, VaShingirai Miti, vanoti mukombe wave kudzoka kwaunofanira kuve uri.
Asi maroto emaWarriors, neemurairidzi wavo, pamwe neeZimbabwe yese, anokwanisika chete ndokunge kana maWarriors adambura Chipolopolo muRoyal Bafokeng Stadium neSvondo.